Football Khabar » के तपाईंले कोपा अमेरिका हेर्न पाउनुभएको छैन ? यसरी हेर्नुहोस्
के तपाईंले कोपा अमेरिका हेर्न पाउनुभएको छैन ? यसरी हेर्नुहोस्
यतिबेला ३६औं संस्करणको कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा जारी छ । यसपटक यो प्रतियोगिता भारतलगायत सब–कन्टिनेन्ट देशहरूमा टिभी–च्यानलमा लाइभ प्रशारण छैन । दर्शकहरूले यो प्रतियोगिता इन्टरनेट साथ विभिन्न एपहरूमार्फत् हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ! विगत वर्षहरूमा भारतको ब्रोडकास्टिङक कम्पनीले कोपाको प्रशारण अधिकार खरिद गरेर भारतसहित सब–कन्टिनेन्ट राष्ट्रमा प्रशारण गर्दै आएको थियो । तर, यसपटक सोनी नेटवर्कले कोपाको प्रशारण अधिकार खरिद नगरेकाले भारत र नेपालसहित सब–कन्टिनेन्ट राष्ट्रहरूमा यो खेल टिभीमा लाइभ छैन । कोपाको लाइभ विभिन्न फेसबुक पेजहरूले पनि दिइरहेका हुन्छन् । तर, फेसबुकमा यो प्रतियोगिता लाइभ हुनु अवैध हो । तसर्थ, कतिपयले त्यस्ता पेज वा लिंक सेयर गरे पनि ती राम्रा हुँदैनन् भने ‘कपी राइट’का कारण जतिबेला बन्द हुनसक्छन् । त्यसैले फेसबुक लाइभको भर यसमा हुँदैन ।
नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा टिभीमा यो खेल लाइभ हेर्न नपाइरहेका दर्शक तथा फुटबलप्रेमीहरूका लागि केही सजिला तरिका यहाँ दिइएको छ । यो जानकारी नेपालबाहिर रहेर टिभी वा अन्य तरिका वा माध्यमबाट हेरिरहेकाहरूका लागि नभई नेपालमा रहेका वा बाहिर रहेका त्यस्ता फुटबलप्रेमी जसले सजिलै यस्तो स्रोत वा तरिका थाहा पाउँदैनन्, उनीहरूका लागि हो । इन्टरनेटका माध्यमबाट स्मार्ट मोबाइल प्रयोगकर्ताले विभिन्न मोबाइल एपहरू प्रयोग गरेर खेल लाइभ हेर्न सक्छन् । फुटबल लाइभ दिने थुप्रै एपहरू हुन्छन् । तर, सबै एप सबै देशमा नचल्न सक्छन् । यहाँ सजिला र भरपर्दा दुई एपको प्रयोगबारे बताइएको छ ।
१) यदि तपाईंसँग एन्ड्रोइड भर्सनको मोबाइल र फास्ट नेट छ भने गुगल पेज वा गुगल क्रुम ब्राउजरमा गएर navixsport app सर्च गर्नुहोस् । अनि त्यहाँ सबैभन्दा सिरानमा आउने Navixsport for Android-Download लिंकमा क्लिक गरी डाउनलोड प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् । डाउनलोडका हरेक प्रक्रिया यहाँ दिइएको छ, ध्यान दिएर पूरा गर्नुहोस् । यदि तपाईंसँग द्रत गतिको नेट सुविधा छैन भने HD क्वालिटीमा यस्ता एप वा साइटबाट खेल हेर्न समस्या हुन्छ ।
Install from Google Play (Right Side)
Download APK (Top Black)
Do you want to download Navixsport APP again? Download मा क्लिक गर्नुहोस्
अब सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि तपाईं तल तस्बिरमा दिइएको जस्तै एपको होम पेजमा पुग्नुहुन्छ । यहाँबाट तपाईंले अंग्रेजी कमेन्ट्रीमा सजिलै कोपाका सबै खेल HD क्वालिटीमा हेर्न पाउनुहुन्छ । यसबाट अन्य सबैखाले खेल पनि हेर्न सकिन्छ । यस एपमा टिभी–च्यानलमा लाइभ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलदेखि क्लब फुटबलका महत्त्वपूर्ण सबैखाले खेलहरू लाइभ हेर्न सकिन्छ । फुटबलप्रेमीहरूका लागि यो एप निकै उपायोगी हुनेछ ।
२) अर्को सजिलो एप Live Copa America 2019 Brazil हो । यसलाई तपाईंले सोझै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । डाउनलोड गरेर तपाईंले beIN SPORT LIVE कोलमबाट HD का क्वालिटी लेखिएका मध्येबाट लाइभ खेल भएको च्यानलबाट सजिलै खेल हेर्न सक्नुहुन्छ । यसको पहिलो एप डाउनलोड गरिकसेपछि सिस्टमले तपाईंलाई त्यसैबेला तुरुन्तै सोही नामको अर्को सहयाक एप डाउनलोड गर्न भन्न सक्छ । त्यसो भने त्यो पनि गर्नुस् । अनि मात्रै पहिलोपटक डाउनलोड गरेको एपबाट लाइभ भिडियो आउनेछ ।
तल दिइएको साइटलाई मोबाइल वा ल्यापटप–कम्प्युटरबाट लगिन गरेर तपाईंले HD क्वालिटीमा खेल हेर्न सक्नुहुन्छ । खेल सुरु हुनुभन्दा २–३ मिनेट अघिबाट यो लिंकमा लाइभ हुन्छ ।
website link : www.mrsoccers.com
(होम पेज खुलेपछि केही तल LIVE, SCHEDULE, MATCH RESULTS देखिन्छन् । खेल सुरु हुन लाग्दा त्यहाँबाट LIVE मा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि आफूले हेर्न चाहेको खेलमा क्लिक गरेर HD क्वालिटीमा मज्जाले लाइभ हेर्न सकिन्छ । LIVE मा क्लिक नगरी त्योभन्दा केही तल झरेपछि सोझै सो दिन हुने सबै खेलहरूको सूची हुन्छ । तपाईंले त्यहाँबाट आफूले हेर्न चाहेको खेलमा क्लिक गरेर सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७६, शनिबार १३:१८